Man United oo 2-0 kuxasuuqdat Huddersfield +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Man United oo 2-0 kuxasuuqdat Huddersfield +SAWIRRO
Manchester United ayaa guul weyn gaaraty iyadoo si toos ah isaga xaadirisay wareega quarter finalka tartanka FA Cup, kadib markii ay 2-0 ku duileen Huddersfield Town – waxeyna habeen fiican u aheyd Romelu Lukaku.
Red Devils waxey gaartay markii afaraad oo xiriir ah wareega quarter finalka, waxeyna guushaan imaaneysaa xilli ay marti u noqon doonaan Sevilla todobaadkaan dhamaadkiisa kulan ka tirsan wareega 16-ka Champions League.
GOAL: Daqiiqadii 3-aad: Romelu Lukak ayaa shabaqa soo taabtay kadib markii uu si fiican hal iyo labo ula ciyaaray Mata, ka hor inta uusan daafaca ka xariiftamin si fududna shabaqa u dhex dhigin kubadda.
Goolkas wuxuu u ahaa midkiisii 20-aad ee uu dhaliyo xilli ciyaareedkaan dhamaan tartamada oo dhan taasoo ka dhigan inuu yahay saxiix si fiican kooxdiisa ugu hawlgalay.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayey Red Devils heleen goolka labaad waxaana si qurux badan u caawiyay Alexis Sanchez oo ku sugnaa bartamaha garoonka, Lukaku wuxuu ordaba, shabaqa ayuu la helay daqiiqadii 55-aad.
Alexis Sanchez waxey caawintaas uga dhigneedinuu 16-gool ku lug yeeshay 16-kulan oo uu kasoo muuqday koobka FA Cup, 8-gool iyo 8-caawin.
Natiijada waxey kusoo dhamaatay 2-0, Red Devils ayaana markii labaad garaacday kooxda Huddersfield Town xilli ciyaareedkaan waxeyna kaga jawaabtay guuldaro ay biday October sanadkii lasoo dhaafay.
Manchester United waxey usoo baxday wareega quarter finalka tartanka FA Cup.